Izindaba - Kukhethwe ugandaganda ophakanyisiwe
Kukhethwe ugandaganda ophakanyisiwe we-sprocket!
NgoMashi 12, 2020, iqoqo le-SD7N i-bulldozer ephakeme-yathunyelwa ukuzohlala futhi ilungele ukulayishwa kwezimakethe zezifunda zaseRussia neCIS.
La mabatch bulldozer athengwa yikhasimende lezimayini, ukwenza lo msebenzi wokuhlunga nokuqongelela izinto zokwakha ikhava. Bathenga iqoqo lokuqala le-bulldozer yokushayela okuphezulu kwa-HBXG ngonyaka ka-2015. Eminyakeni emihlanu edlule, la mabhulldoers okuqala aqale ukusebenza cishe amahora angama-20 000 okusebenza. Amaklayenti ahlabeke umxhwele ngemisebenzi emihle maqondana nokuthembeka nokusebenza kahle kwama-bulldozers. Kusukela kukhuliswe umthamo wokukhiqiza wale mayini, iklayenti lenze ukuthengwa kogandaganda futhi ngendlela yokubhida. I-HBXG iphinde yawina ithenda ngesisombululo esihle kakhulu esethulwe esisekelwa yikhwalithi kanye nohlelo olwanelisekayo lwangemva kokuthengisa kwezinsizakalo.
Okwamanje, imikhiqizo eyinhloko ye-SHEHW imboza ugandaganda, ipayipi, isondo elilayishayo, imishini yokumba, umshini wokumba neloli lezimayini njll. Imikhiqizo yayo ka-bulldozer imboza u-bulldozer we-130-430 ogcwele kanye nemikhiqizo enwetshiwe, isetshenziswa kakhulu kwingqalasizinda, ukulawula ugwadule, uwoyela Iphrojekthi yasensimini netheku, ubunjiniyela bamandla wamanzi, imayini yensimbi, isitshalo semfucumfucu yokuthuthwa kwendle, iphrojekthi yokulungiswa kwamapulazi njll. I-SWMC ukuphela komkhiqizi wasekhaya ophethe ubuchwepheshe obuphambili be-sprocket bulldozer ephakeme, njenge-SD7N, SD8N, SD9N, engakwazi ukubona isikali ukukhiqizwa. Ubuchwepheshe obuphakanyisiwe be-sprocket bulldozer busezingeni lobuchwepheshe obuthuthukiswe kakhulu nezinga eliphakeme kakhulu lokukhiqiza. Idizayini enesakhiwo nokuhleleka kunquma i-sprocket bulldozer ephakeme enezici zokusebenza okuphezulu, ikhwalithi ephezulu, ukuqina okuphezulu kanye nokugcinwa okulula.
I-HBXG izonamathela kwifilosofi njengoba yayenza ngaphambili, igxile ezimfunweni zamakhasimende, ukwenza ukuthuthukiswa kwemikhiqizo nokuvuselelwa, iphelelise izinsizakalo zangemva kokuthengisa, ngokuqhubekayo ikhuthaza ukugcwala kwamakhasimende ukuthi aqaphele ukukhula kanye nabalingani!